बैंकको ब्याजदरः निक्षेपमा घट्यो, ऋणमा घटेन - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
बैंकको ब्याजदरः निक्षेपमा घट्यो, ऋणमा घटेन
दीपक भट्ट काठमाडौं पुस १३
वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले भद्र सहमति गरी निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम क्रमशः ९ दशमलव २५ र ९ दशमलव ७५ राख्ने निर्यण्य गरे पनि निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याज अन्तर (स्प्रेडदर) सीमाभन्दा दोब्बर पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्न खोज्दाखोज्दै निक्षेप र ऋणको ब्याजरद अन्तर सीमाभन्दा माथि गएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको अन्तर घटाउन कसरत गर्दै आएको छ। तर अधिकांश बैंकहरुको स्प्रेडदर ८ देखि १० प्रतिशत पुगेको छ। केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमाभन्दा यो दोब्बर हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई एउटा निर्देशन जारी गर्दै स्प्रेडदरबारे नयाँ निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले चैतसम्म ४.७५ र २०७६ असार मसान्तसम्म ४.५ स्प्रेडदर कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।
पुस ५ र ६ गते बैंकहरुबीच भद्र समहति हुनुभन्दा अगाडि स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो।
सीमाभन्दा दोब्बर स्प्रेडदर भए पनि तत्कालै ब्याजदर समायोजन हुने देखिँदैन। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना प्रवाह भइसकेको ऋणलाई आफ्नो प्रक्रियामा ल्याउन करिब १ महिना लाग्ने बताउँछन्। ‘एक पटक प्रवाह भइसकेको ऋणलाई फेरि नयाँ अवस्थाअनुसार मिलाउन करिब एक महिना जति त लाग्छ। त्यतिबेला हामी स्प्रेडदर सन्तुलित बनाउँछौं’, उनी भन्छन्।
भद्र समहति हुनभन्दा अघि गरिएको एक अध्धयनले समेत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथि देखाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकको ब्याजदरको अन्तर ५ दशमलव ६५, विकास बैंकहरुको ५ दशमलव ५० फाननान्स तथा माइक्रो फान्नान्स कम्पनीको ५ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। निक्षेपको ब्याज नघटाउँदाको अवस्थाको स्थिति हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले निक्षेप र ऋणको समन्ध सुदृढ हुन नसकको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले ब्याजदर पारदर्शी हुन नसकेको समेत उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थाका कारण बजार प्रतिस्पर्धी हुन नसकको र अल्पकालीन, दीर्घकालीन ब्याजदरबीच तादम्यता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह उच्च रहेको कारणले पनि ब्याजदर अन्तरमा समस्या देखापरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप परिचालन ३.७ प्रतिशत (रु. १०१ अर्ब ६२ करोड) ले बढेको छ। निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रवाह ८.५ प्रतिशत (रु. २०३ अर्ब ८८ करोड) ले बढेको छ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरुको निक्षेप संरचनामा भने केही परिवर्तन भएको देखिन्छ। कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश यस अवधिमा ४४.८ प्रतिशतबाट बढेर ४६.२ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी, कुल निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपको अंश ५५.६ प्रतिशतबाट बढेर ५६.५प्रतिशत पुगेको छ।
प्रकाशित १३ पुस २०७५, शुक्रबार | 2018-12-28 11:33:16